MANEHO NY TANTARA AMINTSIKA ny Baiboly. Voalohany dia maneho amintsika ny fiantombohan'ny fiainan'ny olombelona izany, rehefa nanao ny lanitra sy ny tany Andriamanitra. Rehefa izay dia asehony amintsika ny tantaran'ny vahoakan'Andriamanitra manomboka amin'ny fiandohana hatramin'ny fiafaran'izao tontolo izao. Farany, asehony antsika ny amin'ny hanavaozan'Andriamanitra indray ny tany amin'ny fiaviany fanindroany.
Mampiavaka ny Baiboly amin'ireo boky masina ampiasain'ny antokom-pivavahana hafa ireo tantara voarakitra ao anatiny. Maneho Andriamanitra izay miasa manokana eo amin'ny tantara ny Baiboly; tsy miezaka manaporofo ny fisian'Andriamanitra izany tsy akory. Inoan'ny Baiboly fa velona Andriamanitra, ary miasa eo amin'ny tantaran'ny olombelona. Niteny lzy tamin'ny voalohany ka àry ny zava-manana aina rehetra teto an-tany (Gen. 1:1-31). Nibaiko an'i Abrama Izy mba hiala tany Oran'ny Kaldeana. Nitondra ny vahoakany nivoaka. an'i Egipta avy tamin'ny fanandevozana Izy. Nanoratra ny didy folo teo amin'ny vato fisaka tamin'ny rantsan-tanany Izy (Eks. 31:18). Naniraka ny mpaminany ho amin'ny vahoakany lzy, nanao fitsarana koa. Nanome ny lalàny ho an'ny Isiraely Izy ary nilaza tamin'izy ireo hizara ny drafi-panavotany amin'ny firenena hafa. Naniraka an'i Jesôsy Zanany Lahy ho ety an-tany Izy, izay nitondra fanovana mandrakizay teo amin'ny tantara.
Hijery ireo toe-javatra manan-danja tao amin'ny tantaran'ny Baiboly isika mandritra ity herinandro ity. Ho hitantsika koa ny porofo sasantsasany izay maneho ny fahamarinan'ireo tantara ao amin'ny Baiboly.